Putin oo maanta la kulmaya Erdogan – Beegsonews-Wararka maanta
Home WARARKA MAANTA Putin oo maanta la kulmaya Erdogan
Putin oo maanta la kulmaya Erdogan
Madaxweynaha Turkiga, Recep Tayyip Erdogan, ayaa booqasho ugu ambabaxaya Russia halkaas oo uu kula kulmi doono dhigiisa Ruushka, Vladimir Putin, magaalada Sochi. Labada madaxweyne ayaa la filayaa inay ka hadlaan xaaladihii ugu dambeeyay ee Suuriya, gaar ahaan howlgalka militari ee uu Turkigu hogaaminayo waqooyiga bari ee Suuriya ee looga soo horjeedo Kurdiyiinta.
Kulankan ayaa ka horreeyay in Moscow ay diido jiritaanka wax dhisid militeri oo sharci darro ah oo ku saabsan dhulalka Suuriya, iyagoo ku baaqaya baahida loo qabo in la furo wadahadal u dhexeeya Ankara iyo dowladda Suuriya, sida lagu sheegay hadal uu soo saaray Wasiirka Arrimaha Dibadda ee Ruushka.
Sarkaal sare oo ka tirsan dowladda Turkiga ayaa sheegay in Ankara ay heli doonto macluumaad ku saabsan aragtida xukuumadda Siiriya iyo tillaabooyinka la qaadayo inta lagu guda jiro kulanka uu Putin la yeelan doono horumarka ka socda waqooyiga Siiriya, kaas oo Kremlin uu diiday inuu ka hadlo.
Inta dhex dhexaad ka ah hadaladan iyo hadalada ka dhanka ah, dowlada Turkiga waxay ku adkeysaneysaa inuusan jirin wax iska badal ah mowqifkiisa Assad, laakiin kahadal xiriirada amaanka ee ka dhexeeya Ankara iyo dowlada Siiriya waxay bixisaa xaqiiqooyin kasoo horjeedda soo jeedimahan.
Previous articleXiriirkaagu Ma Mid Guuleysaneysaa Mise Waa Mid Fashil Ku Dambeynaya…Ogow Xaqiiqada Jacayl Lamaanahaaga Adigoo Eegaya Luqadda Jirka
Next articleCanada .. Trudeau wins second term, although his party has lost the majority
R/Wasaare Khayre iyo Madaxweyne Erdoğan oo Geneva ku kulmay
Waa ayo Dadka la yidhaahdo Hindida cas-cas